शुरु भयो अस्थायी शिक्षक अन्तर्वार्ताको नतिजा सार्वजनिक गर्न – Online Bichar
शुरु भयो अस्थायी शिक्षक अन्तर्वार्ताको नतिजा सार्वजनिक गर्न
Online Bichar 7th March, 2019, Thursday 8:24 PM
भक्तपुर, २३ फागुन । शिक्षक सेवा आयोगले गत असारमा लिएको कार्यरत अस्थायी शिक्षक परीक्षा अन्र्तगत अन्तर्वार्ताको नतिजा सार्वजनिक गर्ने क्रम शुरु गरेको छ ।
पहिलो दिन बिहीबार निम्न माध्यमिक तह अन्र्तगत सबै क्षेत्रको गणित, गणित विज्ञान र कम्प्युटरको नतिजा सार्वजनिक गरेको आयोगले जनाएको छ ।
जसमा ३ सय ९५ जना स्थायीमा सिफारिस भएका छन् । जस अनुसार गणित विज्ञानमा ४५, गणितमा ३ सय ४९ र कम्प्युटरमा १ जना स्थायीका लागि सिफारिस भएको आयोगका अध्यक्ष ताना गौतमले जानकारी दिए ।
’आफ्नो मान्छे दुर्गम क्षेत्रमा हुनुहुन्छ, फोन पनि लाग्दैन न नम्बर थाह छ, न जन्ममिति ? कसरी थाह पाउनु रिजल्ट ?’ एक जना शिक्षकका आफन्तले एडुखबरसँग टेलिफोनमा गुनासो गर्दै भने, ’नतिजा त सार्वजनिक कुरा हो किन गोप्य राख्नु परेको हो ? बुझ्न सकिएन ।’
अब बाँकी विषयको नतिजा क्रमैसँग सार्वजनिक गर्ने गौतमले बताए । इडियुखबरबाट